နှစ်စဉ်ကန်တော့မြဲထုံးစံအတိုင်း ဒီနှစ်မှာလည်း ညီညီမောင်ကို သွားရောက်ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ – အနုပညာရပ်ဝန်း
မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလေ့၊ ငယ်သူက ကြီးသူကို ရိုသေဂါရဝပြုလေ့ရှိတဲ့အချိန်အခါလေးဖြစ်တဲ့ သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါမှာ ကန်တော့ကြတဲ့အလေ့အထလေးကတော့ မြင်သူတိုင်းကို ကြည်နူးပီတိဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါ။ အနုပညာလောကမှာလည်း သီတင်းကျွတ်ကာလတလျှောက်လုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစားချစ်ခင်စိတ်အပြည့်နဲ့ သွားရောက်ဂါရဝပြုကန်တော့ကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အေးမြတ်သူကတော့ သူမင်းသမီးဘဝအစကတည်းက ချစ်ခင်ရင်းနှီးလာရတဲ့ မိတ်ကပ်ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) ကို သွားရောက်ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့ပြီး ညီညီမောင်ကတော့ ပီတိဖြစ်ရတဲ့နေ့ …. ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ရိုးရာ…. မိတ်ကပ်ပညာရှင် နဲ့ မင်းသမီး … အမေ နဲ့သမီး , အမနဲ့ညီမ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လို နေလာကြတာ နှစ်စဉ် ဝါကျွတ်ဂါရဝ လာပြုတဲ့ မမြတ်လေး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး အကယ်ဒမီတွေ အများကြီးရပါစေ နော် ဆိုပြီး ရိုသေသိတတ်လွန်းတဲ့ မမြတ်လေးအကောင်းကို မျှဝေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးကတော့ ပရိသတ်အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားကြသူတွေပီပီ သုသုနဲ့မမြတ်လေးတို့ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကတော့ မြင်သူတိုင်းကို ကြည်နူးစေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေးစားချစ်ခင်မှုအပြည့်နဲ့ နှစ်စဉ်ကန်တော့တဲ့ အစဉ်အလာလေးကို ကိုဗစ်ကာလမှာတောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်နဲ့ အေးမြတ်သူတို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာအချိန်အခါလေးကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။